Al-shabaab oo sheegay in saraakiil ka diileen ciidamada Seirra Leone iyo Jubba oo beeniyey – Radio Daljir
Al-shabaab oo sheegay in saraakiil ka diileen ciidamada Seirra Leone iyo Jubba oo beeniyey
Oktoobar 30, 2013 4:18 b 0
Dhoobley, October 30, 2013 – Ururka Al-shabaab ayaa sheegay in ay dagaal ku qaadeen deegaanka Darbiyow ee Jubbada hoose, halkaas oo ay joogaan ciidamada Sierra leone ee ku jira howlgalka AMISOM.
Sheikh Cabdicasiis Abu muscab Afhayeenka dhanka howlgalladda Al-shabaab oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay dileen dhowr sarkaal oo ka tirsan kuwa Sierra leone, isla markaasna ay gubeen labba gaari oo kuwa booyadaha ah.
?7 Askari ayaan dilnay, dhaawac bandanna waa jiraa dhankooda.? Ayuu yiri Abu muscab
Goobta lagu dagaalamay oo ah tuulada Darbiyow ayaa u dhexeysa deeganada Taabta iyo Dhoobley ee gobolka Jubbada hoose.
Col. Axmed Cabdulaahi oo ah taliyaha ciidamada Jubba ee degmada Dhoobley ayaa beeniyey sheegada Al-shabaab, waxaa uu si cad u sheegay in uusan jirin wax dagaal ah oo dhexmaray Al-shabaab iyo ciidamada ku jira howlgalka AMISOM ee jooga Jubbada hoose.
Baahin: Salaasa, 29 Oct 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Xaliimo Sacdiya Cabdilaahi Cali~ Daljir ~ Garowe